Yechitatu rwendo rwekufamba inosaina chibvumirano chitsva chechiteshi neHawaii
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » USA » Yechitatu rwendo rwekufamba inosaina chibvumirano chitsva chechiteshi neHawaii
Nyika Yekugara paGungwa inobatana neCarnival Cruise Line neNorwegian Cruise Lines (NCL) kugadzirisa hutano nekuchengetedza mapuroteni ekufambisa rwendo muHurumende yeHawaii.
The Hawaii Dhipatimendi Rekutakura (HDOT) Harbours Division inozivisa kuitwa kwechibvumirano chechitatu chechiteshi chine rwendo rwekufamba kuti utangezve kufamba mumvura yeHawaii.
Iyo World Residences paGungwa inobatana neCarnival Cruise Line uye Norway Cruise Lines (NCL) kugadzirisa hutano nekuchengetedza mapuroteni ekufambisa rwendo muHurumende yeHawaii.
Per the CDC kurongeka, kupera muna Ndira 15, mitsara yekufamba nechikepe inokwanisa kutakura vanhu vanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu (vakasanganiswa vatyairi nevashandi) uye mafambiro anosanganisira kugara kwehusiku hunodiwa kuve nechibvumirano chechiteshi nechiteshi cheko uye zviremera zvehutano. Chibvumirano chechiteshi chinofanira kusanganisira:
Chibvumirano chekurapa chinotsanangura kubuda kwevafambi kana vashandi vanoda kutarisirwa
Chibvumirano cheimba chinofanirwa kuvharirwa, kana kudiwa kwevafambi kana vashandi
Kubvumwa kwezviwanikwa zvehutano hweveruzhinji zvenzvimbo dzenzvimbo uye nzira dzekudzivirira dzinoitwa nemafambisirwo erwendo kuderedza njodzi yekupararira kweCOVID-19.
Zvibvumirano zvechiteshi zvakasainwa zvichashanda kudzamara zvatsiviwa nechibvumirano chitsva zvisinei nekupera kwenguva CDC order. Chibvumirano ichi chinobvumirawo Hurumende kuti imbomisa, ikanzure, kana kugadzirisa gwaro iri chero nguva kana zvinhu zvachinja. MaCounties anogonawo kuita zvimwe zvirambidzo chero nguva.
Chibvumirano chinoda kuti ngarava yega yega ive ne-board yekuongorora uye vashandi vekurapa kuti vaone kudzivirira kwakaringana, kudzikisira, uye kupindura mapuroteni uye kudzidziswa. Pamusoro pezvo, mitsara yekufamba nechikepe yakazvipira kumazinga akazara ekudzivirira kuwedzera kune pre-board bvunzo uye paboard kuchengetedza uye kuchenesa mapuroteni.
The Nyika yeHawaii zvichange zvichida kutora chikamu muState's Safe Travels digital platform kuti uise humbowo hwejekiseni kana mhinduro dzisina kunaka dzemitsara yerwendo inosvika muHawaii kubva kunze kwenyika. Safe Travels kutora chikamu hakuzoshande kune mitsara yekufamba nechikepe ichipindirana nezvisland.
India Kufamba Mafambiro Sekuonekwa nevatambi Vakakosha Maindasitiri